လူမီနီယမ် CNC စက် Precision စက်ပစ္စည်း - Anebon
CNC Mills ဝန်ဆောင်မှု
ဝန်ဆောင်မှု Casting Die
CNC Mills အစိတ်အပိုင်းများ
ကျနော်တို့ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နိုင်သောအရာကိုအများ၏နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေး၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ပါသည်။ တင်းကျပ်တဲ့သည်းခံစိတ်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းများအတော်လေးတည်ငြိမ်, ဖြည့်တန်းနဲ့အတူဖြစ်နိုင်သမျှတွေဟာပေမယ့်ကျနော်တို့အတိုင်းအတာ၏ 100MM နှုန်း 0.01 ±အဖြစ်တင်းကျပ်စွာအဖြစ်သည်းခံစိတ်မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Precision CNC အစိတ်အပိုင်းများထုံးစံညွှန်ပြပစ္စည်း clients များရန်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်မြင့်။
Precision Components ဖွင့်
CNC peek အစိတ်အပိုင်းများဖွင့်
လူမီနီယမ် CNC န်ဆောင်မှုများ
စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေဆုံး
Anebon 2010 ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအတွက်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲစက်မှုလုပ်ငန်းများရောင်းချမှုအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့က ISO 9001 လွန်ပြီ 2015 အောင်လက်မှတ်။
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသော CNC ကြိတ်ခြင်းနှင့်လှည့်စက်တွေအပါအဝင်ဂျပန်ကနေအဆင့်မြင့်အကျိုးရှိစွာနှင့်မြင့်မားသောစံစက်တွေ, ရှိသည်, မျက်နှာပြင် grinder, ပြည်တွင်းရေးနှင့်လွင်ပြင် grinder, Wedmls, Wedmhs Insight web studio ၏။ ငါတို့သည်လည်းအများဆုံးအဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများရှိသည်။ 0.002mm ±မှတက်သည်းခံစိတ်နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။
Our History Industries Customer Reviews ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်
PERCISION, performance, and ယုံကြည်စိတ်ချရသော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရာ, ခေါင်းဆောင်မှု, innoation, ထုတ်ကုန်
ဥရောပကနေဖောက်သည် Anebon လည်ပတ်ခဲ့
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-13509836707
နေရပ်လိပ်စာ: Rongtong Industrial Park,
သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအစိတ်အပိုင်းများ , လူမီနီယံသတ္တုများပုံသွန်း, အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. လူမီနီယံသေဆုံး , လူမီနီယံသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း , အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. , အလူမီနီသေဆုံးသွန်း,